Vaenzi uye Kuratidzwa Zvinoitwapo: Hofisi yeZvapupu zvaJehovha muBrazil
Tinokukoka kuti uzoona zvinoitwa pamahofisi edu ayo atinoti Bheteri. Unogona kuona zvinoitwa pane mamwe mahofisi edu usina anokutungamirira.
Yambiro nezveCoronavirus (COVID-19): Munyika dzakawanda takamisa urongwa hwekuti vanhu vauye vachizoona mahofisi edu. Kana paine hofisi yawanga uchida kuona tinokumbira kuti uifonere.
Munofanira kutanga mabhuka musati mauya kuzoshanyira mahofisi here? Ehe. Kuti pasazove nevanhu vakawandisa, tinokukumbirai kuti pamunouya kuzoshanyira mahofisi edu, mutange mabhuka pasinei nekuti muri kushanya makawanda sei.
Munofanira kusvika nguvai? Kuti vanhu vasazowandisa panguva imwe chete, tinokukumbirai kuti musakurumidzisa kusvika, asi munogona kuuya henyu pasara maminitsi 30 kuti nguva dzamakabhuka dzikwane.
Kuratidzwa zvinoitwa pamahofisi edu
Kuona Pasina Ari Kukutungamirirai
Bhaibheri Uye Munyori Waro. Chikamu ichi chinoita kuti vanhu varemekedze Munyori weBhaibheri Jehovha Mwari uye chinotaurawo nezvedingindira reBhaibheri: Umambo hwaMwari. Mucharatidzwawo kuti Bhaibheri rakachengetedzwa sei kusvikira nhasi, uye kuti Jehovha akaita sei kuti mashoko arimo asachinjwa pasinei nezvaiedza kuitwa nevanhu vaipikisa.
Nhoroondo Yedu. Chikamu ichi chinoratidza kuti Jehovha akakomborera sei basa rekuparidza range richiitwa muBrazil kwemakore 120 apfuura. Mucharatidzwawo zvimwe zvakawanikwa zvinoratidza matangiro akaita basa rekuparidzira uye kukura kwarakazoita muBrazil, pasinei nekutambudzwa uye kupikiswa.
Dhaunirodha kabhuku kanoratidza zvinoitwa pahofisi
Mahofisi Uye Kuratidzwa Zvinoitwapo: Brazil